Galaxy S3[i9300] ကို official v4.1.2 တင်ပြီး Rootနည်း – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Coin Dozer v 5.9(latest version)for android Conferendo videochat for android Mobile ဖုန်းသုံးစွဲမှုမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် ကွန်ပျူတာဈေးကွက်အရောင်းအ၀ယ်ကျဆင်းနေ Optimize Master v1.3 for Android AVP: Evolution v1.3.2 APK+OBB(238Mb) Home
Published On: Wed, Feb 6th, 2013 Android ROM / Android Tutorials / Android ဖုန်း root လုပ်နည်းများ / မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ Tutorials | By naung2soe4750 Galaxy S3[i9300] ကို official v4.1.2 တင်ပြီး Rootနည်း
Tags Share Galaxy S3[i9300] ကို official v4.1.2 တင်ပြီး Rootနည်းလေးကို တချို့မသိသေးသောသူအများအတွက်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Samsung Driver– > Kies
Odin – > Odin v3.04
4.1.2 firmware –> S3 4.1.2 XXELL1
==============!!! Password => MMAS !!!==============
အဆင့်(1)Driver ကို ကွန်ပျူတာမှာ Install ပေးလိုက်ပါ Run ထားစရာမလိုပါခင်ဗျာ
အဆင့်(2)firmware ကိုဇစ်ဖြည်လိုက်ပါ အထဲမှာ .tar.Md5 ဖိုင်တခုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်…..
အဆင့်(3)Odin ကို Run လိုက်ပါ
PDA ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ အစောကဇစ်ဖြည်ထားတဲ့ထဲက md5 ဖိုင်လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
အဆင့်(4) ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်လိုက်ပါ… Download Mode ၀င်ရအောင် ( Home+Volume Down+Power) / Warning ပေါ်လာပြီး.. Continue-Volume Up ဆိုရင် V Up ကီးတချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ
Downloading ဆိုတာပေါ်သွားရင်ကြိုးချိတ်လိုက်ပါ…….. Odin မှာ မီးရောင်လေးသန်းနေပါလိမ့်မယ် ADD ဆိုတာလေးကိုလဲတွေ့နိုင်ပါတယ်
အဲလိုမပေါ်ဘူးဆိုရင် Driver ကိုတချက်ပြန်စစ်ကြည့်ပါ
Odin ကသိပြီဆိုရင်တော့.. Start ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ..သူ့ဟာသူ Install နေပါလိမ့်မယ်…Odin မှာ PASS ပြသွားပြီဆိုရင်တော့ ကြိုးဖြုတ်ပြီး ပါဝါဖွင့်လိုက်ပါ…….Setting ထဲက About Phone/Device ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါ Android Version 4.1.2 ကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်
အဲဒါဆို official version 4.1.2 တင်တာပြီးပြီ ဟွန်းးး ——————–!!!———————-
မကျေနပ်သေးဘူး Root ဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကိုဒေါင်းယူလိုက်ပါ I9300 Root
အဲဒီကောင်လေးကို Odin ရဲ့ PDA မှာသွင်း ..ဖုန်းကို Download Mode ၀င် ချိတ် Start နှိပ် PASS ပြ.. Root ပြီးပြီ :D
CWM — > သွင်းချင်သေးသူများကတော့ CWM နောက်ဆုံးTouch Version လေကိုဒေါင်းယူလိုက်ပါ
ပြီးရင်တော့ အဲဒီဇစ်ဖိုင်လေးကို Odin ရဲ့ PDA ကနေ Flash ပေးလိုက်ပါ
ပြီးသွားရင်တော့ Recovery Mode ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ.. Stock Recovery အစား လှပတဲ့ CWM Touch Recovery လေးကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ——————–!!!———————-
နောင်နောင် (Innocent Love)
naung2soe4750 - Related News
Galaxy Ace2 GTI8160P သမားများအတွက် jellybean 4.1.2 တင်ခြင်း
74 comments on “Galaxy S3[i9300] ကို official v4.1.2 တင်ပြီး Rootနည်း”	phownkyee on February 7, 2013 at 4:48 am said:
Reply ↓	cloud on February 7, 2013 at 1:55 pm said:
JB မှာ မြန်မာစာ အဆင်မပြေဘူးနော် အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးကြပါဦးဗျာ
Reply ↓	cloud on March 13, 2013 at 12:32 pm said:
JB မှာ မြန်မာ စာရိုက်ရင် ဥပမာ မေမေ ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ် ဗျာ ဒါပေမယ့် ဖုန်းမှာပေါ်လာတာက မေမ ဆိုပြီး ပေါ်လာပါတယ် အဲဒါဘာကြောင့်ပါလဲ သိချင်ပါတယ် မြန်မာစာကို နည်းလမ်းပေါင်းတော်တော်လေစုံနေပါပြီထည့်တာ သို့ပေမယ့် ခုနက error အတိုင်းဖြစ်နေပါတယ် model GT-I9300 ပါ 4.1.2 တင်ထားပါတယ်
Reply ↓	moe Zak on April 12, 2013 at 2:06 am said:
ဟုတ်တယ်အကိုရေ…..jelly Bean တင်ထားတဲ့ ဖုန်းတိုင်းမှာအဲ့ လိုပေါ်တာဗျ….
မေ မေ ဆိုပြီးSpace ခြားရိုက်မှရတယ်ဗျ…ကျွန်တော့ဖုန်းလည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ…ဒါကြောင့်ကြိုးစားမနေပါတော့နဲ့ … ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်…ပြောပြတာပါ.. Reply ↓	za on February 25, 2013 at 9:17 am said:
phone download mood ka bae nar ka lae
Reply ↓	naung2soe4750 on February 25, 2013 at 9:51 am said:
za–> Download Mode = Power Off >> Home + volume down + Power ၃ခုကိုတွဲနှိပ်ပေးထားလိုက်ရင် volume up:continue ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ် v up ကီးတချက်နှိပ်ပေးလိုက်ရင် Downloading ဆိုတာပေါ်နေပါလိမ့်မယ် အဲဒါဆိုရပါပြီ
Reply ↓	pyae phyoe aung on February 25, 2013 at 1:04 pm said:
ကျွန်တော် phone က 09420,… ပါ ။ phone က စဝယ်တည်း က Message ပို့ လို့မရဘူး။ အဝင် တော့ရတယ်။ သူများ handset ထဲ ကျွန်တော့် SIM CARD ထည့်လဲမရဘူး ။ သိတဲ့ လူ များ ရှိရင် ပြောပြ ပေးပါ ခင် ဗျာ။ ကျေးဇူးပါ ။ HANDSET က galaxy noteပါ။
Reply ↓	Nwe Nwe on March 4, 2013 at 8:12 am said:
message center number ပြောင်းလိုက်လေရပြီအဲဆို
Reply ↓	yarrzar on February 26, 2013 at 4:11 pm said:
samsaung glaxy s3 လေး ပါဝါဖွင့်လို့ မရတော့လို့ ပါ။
Reply ↓	zawlin on February 28, 2013 at 5:09 pm said:
samsaung LOGO ပဲပေါ်နေပြီးဆက်မတက်တော့တာလား?
Reply ↓	ppk on February 28, 2013 at 3:09 am said:
Is it ok every i 9300 ???
Reply ↓	hantunlinn on March 1, 2013 at 9:41 am said:
samsung galaxy s3 4.2.1 new custom rom outed last day …please i want do download ……..thank
Reply ↓	Aunghtike on March 1, 2013 at 2:45 pm said:
Reply ↓	byakkar on March 2, 2013 at 3:25 pm said:
down loz lae ma ya tot woooooo ku ma twe tae har ko Reply ↓	naung2soe4750 on March 2, 2013 at 5:07 pm said:
Aunghtike and byakkar–> Download Link တွေက Mediafire account Block ခံလိုက်ရသည့်အတွက် ပျက်သွားတာပါ
အခြား firmware link တွေကိုလဲ ပြန်လည်ပြီးတင်ပေးပါမယ် Reply ↓	naing on March 5, 2013 at 3:26 pm said:
Reply ↓	naing on March 5, 2013 at 3:27 pm said:
Reply ↓	naung2soe4750 on March 11, 2013 at 9:51 am said:
naing–> Root ပြီး မြန်မာစာသွင်းတာပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်
Root ပြီးပြီဆိုရင် https://www.dropbox.com/s/xp03ng7gt719t3k/Zawgyi FontChanger.apk
super su permission တောင်းရင် grant ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
reboot ကျပြိးပြန်တက်လာရင် အဆင်ပြေပါပြီခင်ဗျာ
Reply ↓	ကိုတိုး on March 7, 2013 at 4:54 pm said:
s3 က ၄.၂.၁ မထွက်သေးဘူးလား
Reply ↓	naung2soe4750 on March 11, 2013 at 9:52 am said:
Tested Firmware v4.2.1 ထွက်နေပါပြီ
Reply ↓	Myo Min Hein on March 8, 2013 at 10:58 am said:
ကျွန်တော့် SIII လေးကဆိုင်မှာ version 4.1.2 တင်ထားတာပါ
အစ်ကို root ဖောက်နည်းလေးနဲ့သင့်တော်ပါ့မလား
SIII က Model ဘယ်လောက်လဲခင်ဗျ
I9300 ပဲဆိုရင်တော့အပေါ်က Root file နဲ့ လုပ်လို့ရပါတယ်
Reply ↓	Thu Rain on March 11, 2013 at 7:51 am said:
SIII I9300, Version 4.1.1 ကို Rooted လုပ်ထားပေမယ့်…ဖေ့ဘုတ်။ ချက်တင်၊ မက်ဆေ့မှာပဲ မြန်မာလိုပေါ်ပြီး။ ဂျီမေလ်းနဲ့ ဘရောက်ဆာ သုံးရင်တော့ မြန်မာလို မမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်…တဆိတ်လောက် သိတဲ့သူများ ပြောကြပါဥိးဗျာ…
Reply ↓	naung2soe4750 on March 11, 2013 at 9:53 am said:
Reply ↓	nyan htun on March 12, 2013 at 1:50 am said:
GT-I9100T အတွက် JB ရပြီး လား သိချင်ပါတယ်..
ွှGT-I9100T နှင့် I9100T အတူတူ ဘဲ လား ဆိုတာ လဲ သိချင်ပါတယ်..
ကျနော် ဖုန်းက GT-I9100T ပါ အဲဒီ ဖုန်း အတွက် JB တင်ချင်လို့ပါ…
Reply ↓	naung2soe4750 on March 13, 2013 at 12:25 am said:
Reply ↓	nyan htun on March 13, 2013 at 3:40 am said:
GT- I9100T နှင့် I9100T က အတူတူဘဲပေ့ါနော်…
Reply ↓	Sai on March 12, 2013 at 2:46 am said:
ကျွန်တော်အကိုပြောတာတွေ down ပြီးသွားပါပြီ။ မြင့်နေစဉ်အချိန်မှာ
internet connection လိုလားလို့ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Reply ↓	lin koko on March 12, 2013 at 10:53 pm said:
မြင့်နေစဉ် အချိန်မှာ အင်တာနက်မလိုပါဘူး ခင်ဗျ
Reply ↓	Soe Pai on March 14, 2013 at 5:48 pm said:
bro S3 all atwat lar ??
Reply ↓	naung2soe4750 on March 14, 2013 at 5:55 pm said:
SIII [I9300] Only Reply ↓	တေဇာအောင် on March 16, 2013 at 4:03 am said:
samaung Galaxy S3 Gt I 9300 version 4.1.1 မှာ
ဒါပေမယ့် စာရိုက်တဲ့အခါ ကေကေ လို့ရိုက်ရင်
ကေက လို့ပေါ်နေပါတယ် သရတွေ အားလုံးရှေ့ တစ်လုံးချာ မှာ သွားပေါ်နေပါတယ်
Reply ↓	naung2soe4750 on March 19, 2013 at 1:14 pm said:
Jellybean version တွေအကုန်လုံးမှာ အဲလိုဖြစ်နေပါသေးတယ်
စပေ့ဘား ခံပြီးရိုက်ပါ ထစ်တဲ့နေရာတွေကို Reply ↓	nyeinchan on March 18, 2013 at 2:07 pm said:
S3 I9300 ကို ၄.၂.၁ တင်လိုက်တာ Message ဖွင်.လို.မရတော.လို. ဖွင်.တာနဲ. ERROR တက်တာပဲ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာ
အဲဒီအတွက် recovery mode ထဲဝင်ပြီး factory reset ချပေးလိုက်ပါ
အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် Reply ↓	Aung Ko on March 20, 2013 at 4:59 am said:
download ဆွဲတာ.. password တောင်းနေတယ်ခင်ဗျ… ဘာရိုက်လိုက်ရမလဲ…password လေးပြောပြပေးလို.ရမလား..
Reply ↓	naung2soe4750 on March 20, 2013 at 5:27 am said:
Download Link တွေရဲ့အောက်မှာ Password ပေးပြီးသားပါ
password ကိုလဲ ဖျောက်ထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ သေချာမကြည့်ဘူး
Reply ↓	Aung Ko on March 21, 2013 at 4:35 am said:
ှSorry … bro… သေချာမကြည်.မိလိုက်ဘူး… Reply ↓	Kyaw Thu on March 20, 2013 at 2:50 pm said:
Ald updated 4.1.2.but music player is not working.pls help me.how can i do it.
Reply ↓	Kaung Thant on March 23, 2013 at 7:04 am said:
အကို ရေ ကျနော့် ဖုန်းက S3 i9300 ပါ Android version က 4.1.1 ပါ multi window ဆိုတာ မပါဘူး ခင်ဗျ .. ကျနော် သူငယ်ချင်း S3 i9300 မှာ ကြတော့ multiwindow ပါပါတယ် … သူက 4.1.2 ပါ .. အဲဒါ 4.1.2 ကိုတင် မှ ပါတာလား ကျနော်မသိလို့ ပါ ထုတ်တဲ့ နိုင်ငံနဲ့ များ ဆိုင်နေလားမသိဘူး
Reply ↓	naung2soe4750 on April 7, 2013 at 9:20 am said:
4.1.2 တင်ပြီးသုံးကြည့်ပါ Reply ↓	Pann on March 24, 2013 at 11:05 am said:
ှုှုI9300 အတွက်4.1.2 ဖိုင်တော့ဒေါင်းပီးသွားပြီအကို ဘယ်လိုတင်ရမှာလည်း
ပီးတော့အဲတာတင်ပြီးသွားရင် Official firmwareထွက်လာရင်ဖုန်းထဲကပဲ update လုပ်လို့ရလာ @_@
Reply ↓	Pann on March 26, 2013 at 5:36 am said:
မှားလို့ 4.2.1 ရဲ့ mm3.ttf ဖိုင်ကိုပြောတာ စောဒီး )
Reply ↓	naung2soe4750 on April 7, 2013 at 9:21 am said:
ဒါပေမယ့် စမ်းသပ်ထုတ်ထားတဲ့ leaked firmware ပါ
Reply ↓	Kyaw Thu on March 25, 2013 at 6:17 pm said:
Ald updated 4.1.2.but music player is not working(cant open it).pls help me.how can i do it.
Reply ↓	naung2soe4750 on April 7, 2013 at 9:22 am said:
recovery mode ထဲဝင်ပြီး factory reset ချပေးလိုက်ပါ
Reply ↓	parpu on March 30, 2013 at 11:18 pm said:
my s3 GI19300 not scanning when i turn on wifi….
i don’t know how to do…. someone can help?
Reply ↓	archillies on April 7, 2013 at 7:44 am said:
S3 ကို farmware တင်ပြီးသွားတယ် အားလုံးအဆင်ပြေတယ် ဒါပေမယ် ဖုန်းဝင်လာရင် အသံမကြားရတော့ဖူး ဖုန်းခေါ်ရင်လည်း အသံမကြားရဖူး viber တို့ skype တို့သုံးရင်တော့ အသံကြားရတယ် အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဆိုတာလေး ကို ကူညီပေးပါအုံး thanks .
Reply ↓	naung2soe4750 on April 7, 2013 at 9:23 am said:
အခြား firmware ပြန်ပြောင်းတင်လိုက်ပါနော်
သူ့ Region နဲ့မကိုက်ရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Reply ↓	Myo Aung on April 8, 2013 at 7:25 pm said:
ကိုနောင်နောင်စိုး ရေကူညီပါဦးဗျာ… ကျွန်တော် တင်ထားတာ I9300XXELL4 ဖြစ်နေတယ်ဗျာ အဲ့ဒီကောင်အတွက် root က ရောဗျာ.. ဒီ XXELL1 root နဲ့ရလားဗျ.. Fail ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ Reply ↓	naung2soe4750 on April 26, 2013 at 10:10 am said:
အဲဒါနဲ့မရရင် ဒီ cf root လေးနဲ့ပြန် root ကြည့်ပါ ရပါလိမ့်မယ်
Reply ↓	Phoenix on April 9, 2013 at 1:30 am said:
4.1.2 တင်တာ ဘာ Error တွေများဖြစ်တက်ပါလဲ။ အဆင်မပြေရင် Original ICS ပြန်ပြောင်းလို့ ရပါသလား။
Reply ↓	naung2soe4750 on April 26, 2013 at 10:10 am said:
official firmware ဖြစ်သည့်အတွက် Error မရှိပါ
အခုလိုပဲ Odin ကနေပြန်ဆင်းရပါမယ်
Reply ↓	ထက်ဝေထွန်း on April 15, 2013 at 7:32 am said:
ကျွန်တော်ဖုန်းကျSAMSUNG S3 GT I9300 ပါ ဖုန်းထဲမှာAPP 2SD FANCTION မပါဘူးဖြစ်နေတယ် အဲဒီFANCTION ထည့်လို့၇နိုင်မလား….
Reply ↓	naung2soe4750 on April 26, 2013 at 10:11 am said:
Reply ↓	ထက်ဝေထွန်း on April 15, 2013 at 8:10 am said:
ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်တာ မပေါ်ဘူး Odin မှာ ဘယ်လိုလုပ်၇မလဲ
Reply ↓	naung2soe4750 on April 26, 2013 at 10:12 am said:
ပြီးရင် Odin version ပြောင်းသုံးကြည့်ပါ
Reply ↓	NYINYIHTUT on April 15, 2013 at 8:29 am said:
Reply ↓	Si Thu on April 23, 2013 at 6:20 am said:
ကိုနောင်နောင်စိုးရေ ကျွန်တော် အားလုံး နီးပါး အဆင်ပြေတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
အကို့နည်း အတိုင်းပဲ လုပ်လိုက်တာ
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် CWM က ဘာမှ install လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်…
အခြား odin ကနေ flash လုပ်ရင် ရမယ့် CWM လေးရရင်ပြောပေးပါအုံးဗျာ…:)
Reply ↓	naung2soe4750 on April 26, 2013 at 10:17 am said:
ကို Si Thu ဒီမှာပါ
Reply ↓	Pyae Phyo Han on April 25, 2013 at 6:18 pm said:
odin ရဲ့ PDA ကိုဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲ နောက်ပြီး driver လဲမတတ်ဘူး root ဖောက်မလို့ပါ
Reply ↓	naung2soe4750 on April 26, 2013 at 10:13 am said:
အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ Driver ကိုဒေါင်းပါ
ကွန်ပျူတာမှာ install ပေးထားလိုက်ပါ ပြီး၇င် ရီစတက်ချပေးလိုက်ပါ
Odin ကို RUN ပါ အဲဒီမှာ PDA ဆိုတာလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်နှိပ်လိုက်ပါ ပြီးရင်ဒေါင်းယူထားတဲ့ root file လေးကို ထည့်လိုက်ပါ
ဖုန်းကို Download Mode ၀င်ပြီးကြိုးချိတ်ပါ
Odin ရဲ့ Message Box ထဲမှာ Added ဆိုတာပေါ်လာရင် Start ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
Reply ↓	Pyae Sone on May 1, 2013 at 5:22 am said:
plz post CMW for S3 GT-i9300T as soon as possible.Thanks for all
Reply ↓	Nay Thaw on May 5, 2013 at 1:18 pm said:
Reply ↓	naung2soe4750 on May 16, 2013 at 10:12 am said:
သွင်းထား၇င်တော့ CWM ကနေ flashable zip တွေကိုတင်လို့ရပါမယ်
Rom ကို Back Up and Restore လုပ်ထားနိုင်ပါမယ်
Custom Rom တွေတင်နိုင်ပါမယ်
CWM=CLockWork Mod ပါ
ပုံမှန်ပါတာက Stock Recovery ကို Cwm Recovery ပြောင်းလိုက်တာပါပဲ
Reply ↓	Nay Thaw on May 6, 2013 at 7:02 am said:
Odin link ကသေနေတယ်..လုပ်ပါဦး…
Reply ↓	naung2soe4750 on May 16, 2013 at 10:04 am said:
Link ကကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ ပြန်လုပ်ကြည့်ပါဦးနော့်
Reply ↓	iCe mAn on May 10, 2013 at 1:57 pm said:
အကို s3 အတွက် version 4.2.2 ထွက်ပြီလား။မသိဘူး။
Reply ↓	naung2soe4750 on May 16, 2013 at 10:01 am said:
official leaked version 4.2.1 ပဲထွက်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ
Reply ↓	THINTHIN on May 12, 2013 at 1:24 pm said:
Reply ↓	ko htet on May 13, 2013 at 7:07 am said:
အစ်ကိုရေ driver ကသွင်းလို့မရဘူးအစ်ကို အယ်ရာတက်နေတယ် ကွန်မှာဘာanti-vires မှလဲမတင်ထားဘူး cwm တင်ချင်ရင်ရီကာောရီ မှုကိုမသိလို့ပြောပေးပါလားအစ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
Reply ↓	naung2soe4750 on May 16, 2013 at 9:55 am said:
ပြန်ကြိုးစားပြီးတင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ Kies ရှိထားရင်လဲရပါတယ်
Reply ↓	ဖိုးလင်း on May 15, 2013 at 7:13 am said:
ကိုနောင်နောင်စိုး ကျနော်မေးတာလေးကို ကျေးဇူးပြုပီးဖြေကြားပေးပါဦး. samsung galaxy s3 ကို root လုပ်ရင် root လုပ်မဲ့ဖုန်းက
၁.version နှိပ်နေရမှာလား/ တူရင်ရော ရပါသလား
၂. gt-i9300/ v-4.1.2/ i9300dxemb1
၃. နယ်မြေ ကန့်သားထားတယ်ဆိုတာ က လဲမရှင်းလို့ဖြေပေးပါဥိး
၄. unlock/ offical version / Jelly Bean ဆိုတာလဲ လဲ ရှင်းပြပေးပါဥိး
၅. root လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်အချက်တွေကို အဓိကထားပီး firewall ကိုရွေးချယ်ရမလဲ
၆. root အောင်မြင်လား/မမြင်လား ဆိုတာ ဖုန်းထဲက ဘယ်အချက်ကိုကြည့်ရင် ရမလားဆိုတာ
Reply ↓	naung2soe4750 on May 16, 2013 at 10:00 am said:
အခုကျတော်တင်ပေးထားတာက CF Root ပါ အဲဒီကောင်လေးက Jellybean တွေမှာအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် နောက်က PDA version တွေမှာလဲ တော်တော်များများက အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်
Unlock ဆိုတာက အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် SIm Lock and Unlock
ဥပမာ SOny ,HTC and Huawei Phone တွေမှာဆို၇င် Bootloader Unlock လုပ်ထားမှသာ Root လို့ရနိုင်တဲ့ ဖုန်းအခြေအနေတွေရှိပါတယ်
Samsung မှာတော့ Netlock Lock and Unlock ပေ့ါ
Root လုပ်မယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ Phone Model and version ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ် တခါတလေ သူတို့ရဲ့ Build Number တွေပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် (Samsung တွင်တော့ အဲဒီလောက်မဟုတ်ပါ)
ဆိုလိုတာက အခုတင်ပေးထားတဲ့ CF root ဖိုင်လေးက S3[I9300] Jellybean(4.1.1 and 4.1.2) တွေမှာ Root နိုင်ပါတယ်
Root ဖြစ်မဖြစ်ကတော့ Root ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ မိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာ Super User or Super Su ဆိုတာလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်
နောက်အတိအကျစစ်နိုင်ဖို့က မိမိဖုန်းထဲတွင် Root CHecker လေးသွင်းပြီးတော့လဲစစ်နိုင်ပါတယ်
Myo Min Han on Samsung Galaxy Official FirmwaresZa on Huawei Ascend P1 (U9200) ကို Android 4.1.1 (Jelly Bean) သို့မြှင့်နည်uး.thein wwin 2013@gmail.com on HUAWEI OFFICIAL FIRMWARE များစုစည်းမွှုThurein Aung on Sony Xperia X10/Arc/Arc S/Play/Ray/Neo/Mini/Mini Pro/Pro/Active အမျိုးအစားတွေကို Root လုပ်နည်း နှင့် Root toolkitsai on ဂျပန်သိုင်းသမားဂိမ်း For Android Android Development